China Poker Chips ifektri abakhiqizi | SJJ
Ama-chips we-poker enziwa amakhasimende anika ikhono lokwenza ngezifiso ama-chips awo. Ibhizinisi, izinhlangano zomphakathi kanye nabantu bangazikhomba ngama-chip poker chips abo. Ama-poker chips enziwe ngokwezifiso angafaka igama lamakhasimende, inombolo yocingo, ikheli, ilogo, i-promotio ...
Ama-poker chips enziwe ngokwezifiso anikeza amakhasimende amandla okwenza ngezifiso zawo ama-chips. Ibhizinisi, izinhlangano zomphakathi kanye nabantu bangazikhomba ngama-chip poker chips abo. Ama-poker chips enziwe ngokwezifiso angafaka igama lamakhasimende, inombolo yocingo, ikheli, ilogo, umyalezo wokuphromotha nesiqubulo noma eminye imiklamo ekhethekile. Zingasetshenziselwa ukukhuthaza ibhizinisi ezindaweni ezifana namakilabhu, amahhotela, imigoqo, izitolo kanye nemidlalo yasekhaya. Okwe-ABS impahla singenza umgodi ungeze indandatho nochungechunge. Lapho-ke ungathola i-poker chip keychain.
Izinto: Acrylic, ABS, Clay.
Isisindo: 2-18g. Uma sifuna ama-chip asindayo, singangeza i-iron chip ngaphakathi kwe-chip ye-porker. Ngaphakathi ama-chip ahole mahhala.
Usayizi Ojwayelekile: 40 * 3.3mm, 45 * 3.3mm.
Inqubo yelogo: isilikhi esikrinini, isitampu esishisayo segolide noma isiliva, isitika esiphrintiwe. (Isitika se-laser / isitika se-PV sokuphinda ukhanye / isinamatheli
Izitayela: idayisi, ifanelekile, i-royal flush noma idizayini yangokwezifiso.
Ama-coasters we-Ceramic amunca